Nei kaive kaBhuku “kaduku” kakadyiwa naJohane kuna Zvakazarurwa Chitsauko 10?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Nei kaive kaBhuku “kaduku” kakadyiwa naJohane kuna Zvakazarurwa Chitsauko 10?
Nei kaive kaBhuku “kaduku” kakadyiwa naJohane kuna Zvakazarurwa Chitsauko 10?
Panguva yechiprofita ichi tinofanira kukoshesa zvinhu zviduku zviduku zviri muBhaibheri zvakatarisirwa pasi kana kufuratirwa kana kurwiswa nemakereke.
Tinofanira kukoshesa zviverengo zviduku, nemapoka maduku. Kwete makereke makuru.
EZRA 9:8 Zvino takanzwirwa tsitsi naJEHOVA Mwari wedu nguva duku-duku, akatisiyira vamwe vakapukunyuka, nokutipa mbambo panzvimbo yake tsvene, kuti Mwari wedu avhenekere meso edu, nokutiponesa paduku pauranda hwedu.
Mwari kazhinji anoshanda nevashoma vanenge vasara. Saka musatarisire mbiri asi kurambwa.
ISAYA 1:9 Dai JEHOVA wehondo asina kutisiyira vakasara vashomashoma, tingadai takafanana neSodhoma, takaita seGomora.
Jesu akashandisa guta reSodoma semufananidzo kunguva yekupedzisira apo Roti ega akakunda kupunyuka nevanasikana vake vaviri Moto usati wanaya. Vatatu chete vakapunyuka kubva mumaguta maviri makuru. Mwari haafadzwi nevanhu vazhinji. Anotarisa vakarurama paMwenga wake.
RUKA 17:28 Sezvazvakanga zvakaita vo namazuva aRoti; vaidya, nokumwa, nokutenga, nokutengesa, nokusima, nokuvaka;
Kukanganisa kuduku- duku kunokura kwokonzeresa kuparara.
RWIYO RWASOROMONI 2:15 Tibatirei makava, makava maduku, Anotadzira minda yemizambiringa; Nokuti minda yedu yemizambiringa yotunga maruva.
Kukanganisa kuduku kunopindira kusingagoni kutsigirwa neBhaibheri. Kukanganisa kwakafanana nehosha inokura. Kana tichikanganisa tinoshandisa mavhesi eBhaibheri mashoma kwazvo kutsigira dzidziso yedu. Tinoramba tichibva paMagwaro zvakanyanya.
Vanhu vanoti vane kodzero dzekuturikira zvakavanzika zvisina kunyorwa muBhaibheri. Uku kukanganisa.
II TIMOTIO 4:2 Paridza shoko;
MATEO 4:4 Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangararami nechingwa bedzi, asi namashoko ose anobuda mumuromo maMwari.
Tinofanira kutenda zvakanyorwa muBhaibheri Shoko raMwari chete.
Vanhu vanoti vanoziva Chisimbiso chechinomwe. Asi chaingove runyararo. Hakuna anogona kuturikira runyararo. Kukanganisa uku kwakapararira.
Zvino nekutaura kuti vanoziva Kutinhira kunomwe, vanotaurawo zvakare kuti vane kodzero dzekuturikira zvisina kunyorwa, saka nhau dzakasiyana siyana pamusoro peKutinhira kunomwe dzakatenderera. Saka kukanganisa ikoko kwakabva kwapararira sezvigunwe zvemufananidzo waDanieri wemuHedeni.
Zvino vanoti vanoziva Zita idzva raJesu. Harinawo kunyorwa. Saka dzidziso iyi inorwisa Magwaro zvakazara.
ZVAKAZARURWA 19:12 Meso ake akanga akaita somurazvo womoto; pamusoro wake pakanga panekorona zhinji; wakanga anezita rakanyorwa, risina kuzikanwa nomunhu, asi naiye bedzi.
Pano Bhaibheri rinotaura zviri pachena kuti hakuna munhu anoziva Zita idzva raJesu. Chero munhu anoti anoziva Zita iri anenge achirwisa Magwaro. Haisi nzvimbo yakanaka kuwanikwa tiri.
ISAYA 28:13 Saka shoko raJEHOVA richava kwavari, chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pomurayiro, murayiro pamusoro pomurayiro, apa napapo zvishoma; kuti vaende, vawe nenhendashure, vavhunike, vabatwe nomusungo, vatapwe.
Saka tinofanira kutsvaga muBhaibheri kuti tiwane gwara kuti tigone kunzwisisa chokwadi.
Mavhesi maduku ese eMagwaro anofanira kukwaniswa kwete kufuratirwa.
Nei Jesu akanyora pasi kaviri nemunwe wake?
Vaparidzi vanoita sevanofuratira chidzidzo ichi. Asi yaive nhau yakadzama yaitsanangura kumaJuda kuti Murairo waMosesi waive usina tariro zvakadii pazvikamu zvekuvashandura kuvaita vanhu vari nani.
Jesu paakapa vanhu zviuru zvishanu nevanhu zviuru zvina zvekudya, akaisa kukosha pachiverengo chematengu emafufu ezvakasara. Zvidimbu zvechikafu chakaraswa. Nei?
MATEO 16:9 Hamunzwisisi nazvino here kana kurangarira zvingwa zvishanu zvavanhu vanezvuru zvishanu namatengu amakawana kuti aiva mangani?
10 Kana zvingwa zvinomwe zvavanhu vane zvuru zvina namatengu amakawana kuti aiva mangani?
Chikafu chakasiiwa ndicho chaaikoshesa.
Kwakasara matengu gumi nemaviri nematengu manomwe. Nei zviverengo zviviri izvi?
MuTabernakeri maive nezvingwa gumi nezviviri zvekuratidzira nechigadziko chemwenje minomwe. Nei zviverengo zviviri zvimwechete izvi zvakare?
Musoro wenyu wakabatanidzwa nemuviri wenyu nebonzo remusana rinonzi bhekibhoni. Mabhonzo emutsipa anodaidzwa kuti vetebhuri manomwe nemabhonzo anodaidzwa kuti vetabhure gumi nemaviri anobata mbabvu.
Nzira iri kunyuka inofambirana neMagwaro aya. Jesu ari kuedza kutiudza kutii? Kristu ndiye musoro wekereke (kwete Pope kana pasita).
Akabatanidzwa neMuviri wekereke yake nemapoka maviri makuru. Kereke mukati menguva nomwe dzemakereke varipo kuratidzira chiedza chaMwari kunyika sechigadziko chemwenje minomwe.
Nemarudzi gumi nemaviri aIsraeri vanodzoka kuzogamuchira Ishe Jesu munguva yeKutambudzika kukuru vari vaya 144000 vakarehwa.
Vanomiririrwa nezvingwa gumi nezviviri zvekuratidzira zvaifanira kudyiwa muNzvimbo Tsvene muTabernakeri. Saka maJuda vanofanira kudzokera kuIsraeri nhasi kuitira kuti vanosangana naShe. Kudzosera maJuda kuIsraeri ndicho chinangwa chaMwari chikuru nhasi.
Ngatidzokerei kumunana wematengu ezvekudya.
Jesu akapa vazhinji chekudya kaviri asi vakarasa chikafu chakawanda chacho chakazonongwa nevadzidzi vaJesu. Chingwa nenyama micherechedzo yedzidziso.
Chikafu chaive charaswa ichi mucherechedzo wemaJuda enguva iyoyo achiramba Evangeri raJesu nekumuroverera.
Evangeri rakarambwa iri raizoziviswa kumapoka maviri nevadzidzi vakazova vapostora. Vakanyora Testamente Itsva yakapihwa kukereke mukati memakore ese 2000 enhorondo. Zvino munguva yeKutambudzika maJuda 144000 vachagamuchira Evangeri rakamborambwa nemaJuda makore 2000 akadarika.
Kana zvakavanzika zvaziviswa isu tichagona, saRute, kunonga muono wakadzama muMagwaro kubva pamavhesi maduku (hura hwekoroni husina kunongwa nevaikohwa) akasiirirwa nekutarisirwa pasi uye kufuratirwa nekereke kana kushandurwa nekuti havana kugona kuona zvakadzama zvawo muShoko rakanyorwa.
Chinhu chikuru pamusoro pechiverengo chechinomwe negumi nembiri ndechekuti ndiwo mabhonzo anobatanidza muviri nemusoro.
Kereke yakatanga nekuvimba zvakazara pana Kristu Musoro.
Vaingotenda nekutevera Magwaro akanyorwa.
Kuitira kuwodza kutenda kwevanhu, kuita kwaantikristu kunotsiva Kristu semusoro wekereke neumwewo munhu. Pasita kana kuti mufundisi anosimudzirwa kuti ave pamusoro pekereke. (kunyangwe zvazvo izwi rekuti pasita, mufundisi (rakanzi mufudzi muBhaibheri) rakataurwa kamwechete chete muTestamente Itsva, asi akatukwa katanhatu muTestamente yekare) pekupedzisira Pope achange ava pamusoro pemakereke ese.
Musakanganwe chirevo chakachenjera chiya chekuti, “Simba rinowodza”.
Chero munhu mumwechete anogadzwa pamusoro pekereke anozoita mudzvanyiriri sezvo anenge awodzwa nesimba.
Hapana pakataurwa neBhaibheri kuti pasita kana mufundisi ndiye musoro wekereke. Ndiwo mafungiro eBabironi.
Bhuku “yakazarurwa” zvinoreva kuti mumwe munhu akazivisa zvakavanzika zvekusimuka kwaAntikristu Mutumwa wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10 asati aburuka panyika.
Kana tisingazivi kuti Antichristu akasimuka sei kuva nesimba ipapo hatizooni kuita kwake nekudaro zviri nyore kuti tinyengerwe.
Izwi rekuti “Nazi” rine pfungwa mbiri dzinoyanana naro. Yekutanga ibato revaurayi vasina tsitsi. Yechipiri ndiye munhu Hitira aive musoro webato iri. Kwaive kuita kwenzira mbiri. Hitira aida maNazi kuti vaite zvese zvaaida kuti zviitwe. MaNazi aida simba raHitira kuti rivape mvumo.
Mumashure mekufa kwaHitira muna 1945, kuita kweNazi kwakawira pasi. Vaive vasisina munhu aive musoro wavo kuti vamubatire.
Mweya waAntikristu unovimbawo nemunhu uye bato. Bato iri mweya wemasangano ezvitendero akarongwa nevanhu nezvitendero zvavo zvakaitwa nevanhu uye mitemo yakaitwa nevanhu. Munhu musoro waro ndiPope anotonga bato iri anowana kodzero dzake nekutaura kuti ndiye akatsiva Petro.
Saka kusimuka kwaPope kuti ave nesimba guru kwakatanga nenzira duku kwazvo.
Bhishopu weRoma aitambudzika pakaitwa Constantine mubati weRoma muna 312 AD. Constantine akapa bhishopu weRoma pfuma zhinji nesimba semusoro wekereke yekumadokero. Saka ndiye akanga ari munhu akasimba kumadokero pakatama Constantine achienda kumabvazuva kuguta reConstantinople.
Asi vemarudzi evatorwa vakabva vaparadza hushe hweRoma kumadokero inova Europe yekuMadokero nhasi.
DANIERI 7:8 Ndikacherechedza nyanga, ndikaona rumwe runyanga ruchibuda pakati pedzimwe, ruri ruduku, dzimwe nyanga nhatu pane dzokutanga dzikadzurwa nemidzi yadzo pamberi parwo; ndikaona kuti parunyanga urwo pakanga pana meso omunhu, nomuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru.
Nyanga mucherechedzo wesimba. Vatican yakakura kuita sikweya kiromita rimwechete, ndiro simba kana nyika duku kwazvo pasi rese.
Mepu iyi inoratidza hushe hweByzantine hwekuMabvazuva hwaitongwa nemubati weRoma yekuMabvazuva aigara muConstantinople.
Odoacer, mukuru werudzi rwemaHeruri akabvisa mubati weRoma yekuMadokero muItaly pachigaro muna 476 AD akatonga Italy. Aive asingatendi kuTiriniti saka Pope aive asingafadzwi nazvo. Theodoric nemaOstrogoth, vaigara pedyo neItaly vakakumbirwa nemubati weRoma yekuMabvazuva aive kuConstantinople kuti vapinde muItaly vaparadze vaHeruri, vakaita sekudaro. Asi Theodoric nemaOstrogoth vaivewo vasingatendi Tiriniti saka Pope akaramba asingafari. Mubati aitenda kuTiriniti wemuConstantinople akabva atumira hondo kunoparadza maVhandari (vaive vasingatendi kuTiriniti zvakare) kuNorth Africa sezvo hondo dzavo dzaityisa Roma. Izvi zvakapa mauto aya simba nemukana muNorth Africa uko kwavaizokwanisa kubva vachinorwisa Italy. (Sezvakaita vavaidyidzana navo vakambopamba North Africa vachibva vazopamba chidimbu cheItaly muhondo yePasi rese yeChipiri). Mauto akabva kuConstantinople aya vakaenda kuItaly vakatora makore makumi maviri kuti vaparadze maOstrogoth. Saka marudzi evatorwa matatu aive asingatendi kuTiriniti, uye akabatsiridza pakuparara kwehushe hwenyika yeRoma, akabva aparadzwa. MaHeruri, maVhandari, nemaOstrogoth ndivo vaive nyanga nhatu (kana masimba emarudzi) akabviswa kuti pashaikwe hupikisi padzidziso yeTiriniti pakusimuka kwaPope pamasimba muEurope. Saka Pope akakwanisa kusimuka kuva nesimba pakati pemarudzi evatorwa aive atora nekupamba Europe yekuMadokero kubva kuhushe hweRoma yechipegani. Marudzi evatorwa aya ese muEurope yekuMadokero akatambira Tiriniti saka vakabva vagamuchira Pope semusoro wekereke. Saka kereke yeRoma yakabva yatanga kuzivikanwa nekunzi Roman Catholic muEurope yekuMadokero. Catholic zvinoreva kuti mubatanidzwa. Negore 1200 AD Pope aive ane simba sevatongi kana madzimambo emuEurope.
Pope akava nesimba pamusoro pemarudzi evatorwa nekutaura kuti aive akatsiva Petro. Jesu akapa Petro kiyi yeDenga. Petro aizozarura mukova weDenga paakaudza vanhu kuti vatendeuke vabapatidzwe neZita raJesu Kristu.
MABASA 2:38 Petro akati kwavari: Tendevukai, mumwe nomumwe wenyu abapatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
Iyi ndiyo kiyi yeDenga. Inobata munhu wese, kusanganisira isu nhasi. Kiyi yeDenga, sekuparidza kwaPetro, ndeyekuti tinongofanira kutendeuka kubva kuzvivi zvedu tobapatidzwa muZita raJesu Kristu. Ruwadzano rwemunhu mumwe nemumwe naJesu.
Asi Pope akaudza vemarudzi evatorwa kuti Petro aizozarurira mukova weDenga vanhu vanenge vabatsira Pope uye vaiterera zvaitaurwa naPope. Saka Petro, semunhu, akanga akwidziridzwa kuenda pamusoro paJesu. Jesu ndiye Mukova weDenga. Asi Pope anoti Petro ane makiyi eMukova saka Petro ndiye anosarudza kuti anoda here kuzarura Mukova kana kuti kwete. Nekutya simba rainzi rina Petro rekutonga kuti ndiyani anokodzera kupinda Denga uye kuedza kwavo kumufadza, vemarudzi evatorwa vakatanga kuterera Pope. Vakatenda kuti Petro aisazovazarurira Mukova weDenga kana vakasaterera nekuremekedza Pope.
Saka Pope akati Petro akamira panzvimbo yaJesu, Mwanakomana waMwari.
Gwaro raidaidzwa kuti “Donation of Constantine” raive gwaro rekaitwa zvechitsotsi rikashambadzwa mumakore ana 700 kuitira kusimudzira Pope. Zvakazongoburitswa pachena mugore ra1440. Kusvika apa, maPope gumi aive atoshandisa gwaro iri kutsigira simba ravo). Gwaro iri rakaburitsa kuti vawane rubatsiro rwemarudzi evatorwa, kunyanya maFrank vaive nesimba kwazvo, uyezve kuchenetedza Pope kubva kumubati weRoma yekuMabvazuva. Gwaro iri raitaura kuti Petro aive nechinzvimbo chinoyemurika VICARIVS FILII DEI. (Panzvimbo yeMwanakomana waMwari). Mune mamwe mashoko, ndiPetro kwete Jesu anosarudza kuti Mukova wekupinda Denga ungazarurwa here kana kuti kwete. Mamwe mavara muchiLatini anoshanda semanhamba. Mavara kana mabhii ari pazita rechinzvimbo chakaiswa Petro akabatanidzwa mumanhamba anoburitsa 666.
(I = 1, V = 5, L = 50, C = 100, D = 500)
MaRoma kazhinji vaishandisa V panzvimbo paU nekuti mitsetse yakatwasuka iri nyore kunyora pamabwe. Tichiri kutaura kuti W ndi “dhabho u” mune mamwe mazwi UU zvinonyorwa zvichinzi VV kana kuti W.
Petro ndiye ega munhu akashandisirwa chinzvimbo chaVICARIVS FILII DEI. Asi zvakabva zvaunza marudzi evatorwa vaigara muEurope pakuzvininipisa kuna Pope nekuti vaitenda kuti aive akatsiva Petro saka Petro haaizosiya vachipinda Denga kana vasina kuterera Pope.
“Uchitaura zvinhu zvikuru” ndiko kutiudza kuti tingasvika sei pakupinda Denga.
“Meso” anotaura pamusoro pehungwaru. Kusimudzirwa kwevanhu vanotungamira kuva pakutonga kereke. Nhasi, vanhu vanotya kwazvo nekuterera mapasita avo pane kuterera kwavanoita Magwaro. Tsika dzemakereke nemazano emapasita ndizvo zvinotonga kereke uye zvapatsanura kereke kuva masangano 45000 akasiyana.
Kisimusi. Muti weKisimusi. 25 Zvita. Achibhishopu. Renti. Sangano. Katikasi. Kubvumirana.
Maovhasiya edunhu. Tiriniti. Mwari Mumwechete muVanhu vatatu. Chivi chekutanga chaive kudya apura chinova chikonzero nei Eva akarangwa nekuzvara mwana.
Mazwi aya ese nekutaura ikoko kwese hazvimo muMagwaro asi zvinotendwa zvakanyanya nemaKristu. Saka tsika dzekereke, dzakatangira kuRoma, dzakapararira mumakereke ese.
Nyanga duku yaantikristu, kanyika kaduku keVatican, kakakura kuparadzira kurudziro yako pasi rese.
Nhasi maKristu vanotenda kumazwi asimo muMagwaro akagadzirwa nehungwaru hweRoma.
Saka mweya waantikristu wakamuka mukereke yeRoman Catholic ukapararira kumasangano anopikisana nayo.
Danieri akaona chimwe chiratidzo chehushe hwemaGiriki hwaAlexander mukuru hwakazoparara kuita hushe huna huduku.
DANIERI 8:8 "Nhongo ikazvikudza zvikuru kwazvo ; zvino yakati yasimba, runyanga rukuru ndokuvhunika, nyanga huru ina dzikabuda panzvimbo yarwo, dzakatarira kumhepo ina dzokudenga.
Mhepo ina dzokudenga zvinoreva kuti kwaive nezvirevo zvemweya pachiitiko ichi.
Hushe hwaive huduku kwazvo pahwese huri huna hwaive hushe hwePegamosi hwaitongwa naLisimachusi. Muprista mukuru kana kuti Pontiff wezvakavanzika zveBabironi aive atizira kuPergamosi pakapambwa Babironi naCyrusi muna 539 BC. Muna 133 BC muprista aive mambo Attira III paakafa akapa hushe hwake hwePergamosi kuRoma. Jurio Kesari akabva abhadhara chiokomuhomwe kuti aitwe Pontiff wezvakavanzika zveBabironi muna 63 BC. Vabati vese vehushe hweRoma vakazotorawo chinzvimbo ichi kusvikira pachakazorambwa naTheodosiusi muna 378 AD. Negore 400 AD bhishopu weRoma aive atora chinzvimbo chaPontiff. Pontiff aifanira kugara musoro wake wakafukidzwa zvichibva pamirairo yeBabironi. Ndicho chikonzero nei Pope achipfeka kangowani pamusoro wake.
Pakakurirwa hushe hwemaGiriki neRoma, zvakavanzika zveBabironi zvakazomukira kuRoma.
Pakaparadzwa hushe hweRoma nemarudzi evatorwa, zvakavanzika zveBabironi zvakamukira mukereke yeRoman Catholic.
DANIERI 8:9 Zvino kuno rumwe rwadzo kwakabuda runyanga ruduku, rwakazokura kwazvo, kumativi ezasi, nokumavirazuva, nokunyika yakaisvonaka.
MuMagwaro kumabvazuva kunogarotaura pamusoro pemadhimoni. Pakutanga Kaini akaenda kumabvazuva.
Zviumbwa. Zvifananidzo. Kunamata Maria. Kunamata kuna Petro. Kunamata vatsvene vakafa. Izvi zvese kuita kwekupira midzimu izvi zvese zvinodzikisira vatsvene vakafa vese kuchidanho chemidzimu.
DANIERI 8:10 Rukakura kusvikira iko kuhondo dzokudenga, rukawisira pasi dzimwe hondo nenyeredzi, ndokutsika pamusoro pazvo.
Saka Danieri akaronda gwara rezvakavanzika zvaAntikristu muTestamente Yekare sezvakavanzika zveBabironi zvikanovanzwa muPergamosi, zviri zviduku zvisina aizviona, zvikazoenda kuhushe hweRoma. Ikoko zvakanovanda zvisingaonekwe, kusvikira zvatanga kusimuka kuva nembiri naPontiff wazvo Jurio Kesario paakatonga nyika. Mubati Theodosius paakaramba chinzvimbo chaPontiff, chinzvimbo ichi chakanyangira chisina anoona kupinda mukereke yeRoman Catholic. Saka Pontiff weRoma kana kuti Pope akasimuka kuva nesimba nekupararira kwezvakavanzika zveBabironi pasi rese.
Zvakavanzika zveBabironi zvakapindawo muchivande mumakereke akabuda muCatholic anoipikisa.
Kubva pamavambo maduku ekuzvininipisa zvava pachinzvimbo chekukurira pasi rese.
Asiwo Jesu aivewo nemavambo akaninipiswa.
MIKA 5:2 "Asi iwe Beterehema Efurata, muduku kwazvo pakati pezvuru zvamazana zvaJuda, kwauri kuchandibudira mumwe achava mubati pakati paIsiraeri; mabudiro ake ndaakare, pamazuva akarekare.
Beterehema raive guta duku kwazvo.
Asi ndimo makaberekerwa Jesu. Jesu akatanga hushumiri hwake muguta duku uye pakupedza kwake kwaingova nevanhu zana nemakumi maviri vaive vakaungana muimba yapamusoro kuti vagamuchire Mweya Mutsvene. Saka Kuuya kwake kwekutanga kwakapedzisa hushumiri hwake nevateveri vashoma kwazvo.
Zvimwechete zvichaitika paKuuya kwake kwechipiri.
MATEO 10:42 Aninani unopa muzita romudzidzi mumwe wavaduku ava mukombe bedzi wemvura inotonhorera anwe, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, haangatongorashikirwi nomubairo wake.
Kuita kuduku kwerudo kunoonekwa.
Vana vaduku vanotaura pamusoro penguva yekupedzisira apo isu vana tinofanira kudzoserwa pakutenda kumwe kwakaitwa nemadzibaba mapostora. Mukombe wemvura mucherechedzo wedzidziso dzeBhaibheri.
Jesu anotarisira kuti tiparidzire vanhu chokwadi, kwete dzimwe dzidziso dzakaitwa nevanhu.
MATEO 18:4 Naizvozvo aninani unozvininipisa somwana uyu muduku ndiye mukuru muvushe hwokudenga.
Kuzvininipisa chinhu chinoyemurika. Kuzvininipisa kwatinoita, uye kana tikafunga nezvedu zvishona, Mwari ndipo paanonyanyawo kutishandisa.
I JOHANE 2:13 Ndinokunyorerai, madzibaba, nokuti munoziva iye wakanga aripo kubva pakutanga. Ndinokunyorerai, majaya, nokuti makakunda wakaipa. Ndakunyorerai, vana vaduku, nokuti munoziva Baba.
Madzibaba ndivo vekereke yekutanga yatinofanira kudzokera pakutenda kwayo. Majaya ndivo vakasimba zvekukunda kurarama muNguva yeRima nehondo dzezvitendero pakati pechiCatholic nevemasangano aiipikisa. Vakabva varwisa Diaborosi mhiri kwemakungwa munguva huru yemamishinari.
Tiri vana vaduku avo pakupedzisira tichadzokera kune zvakatendwa nekereke yekutanga.
Tinoziva kuti baba ndivo Mwari avo kuzara kwavo kwese kwakagara muna Kristu pamuviri. Saka tinoziva kuti zita reMunhu raMwari Baba ndiShe Jesu Kristu.
Hamugoni kuziva Mwari Baba kana musingazivi Zita rake.
Richitaura pamusoro paKristu, Bhaibheri rinoti:
MATEO 19:14 Asi Jesu wakati kwavari: Regai vana vaduku, musavadzivisa kuvuya kwandiri; nokuti vushe hwokudenga ndohwavakadai
Jesu noda vana vaduku (isu maKristu panguva yekupedzisira) kuti tidzokere kwaari, ndiye Shoko. Haadi kuti titende mudzidziso dzekereke dzakaitwa nevanhu kana mazwi akabatwa paitaura chero mumwe mutungamiri wekereke.
Paakataura kuti “Regai vana vaduku”, aireva kuti panguva yekupedzisira kuchave nekutambudzika uye kurambwa kukuru kuchasangana nevana vaduku kuitira kuti vagone kudzokera padzidziso dzeBhaibheri.
I JOHANE 4:4 Vana vaduku, imi, muri vaMwari, makavakunda, nokuti uyo, uri mamuri, mukuru kunaiye, uri munyika.
Mweya Mutsvene uri matiri ndiwo wega nzira yatinogona nayo kukunda kutadza kwese kwenguva yedu toguma takutenda zvose zvakanyorwa muBhaibheri.
I JOHANE 5:21 Vana vaduku, zvichenjererei pazvifananidzo.
Tiriniti yeVanhu vatatu, mumwe nemumwe wavo ari Mwari, ndiyo dzidziso yakabudirira kwazvo padzidziso dzese dzakagadzirwa naDiaborosi. Yakatangira kuBabironi izvozvi yatova dzidziso huru yakasimba inotendwa mumakereke akawandisa acho.
Musanamate munhu. Musakwidziridze munhu pamusoro pevanhu. Garai neMagwaro sezvaari.
JAKOBO 2:1 Hama dzangu kutenda kwenyu kunaShe wedu Jesu Kristu, iye Wokubwinya, ngakurege kuva nokutenda zvinovonekwa zvomunhu.
Saka “duku” rine zvirevo zvakawanda panguva yekupedzisira.
Kuchava neboka duku revatendi.
Tiri boka duku revana vakadzoserwa pakutenda kwemadzibaba ePentekosita.
Tinofanira kufunga zviduku kwazvo pamusoro pedu. Mafungiro edu haana kukosha zvachose. Tinofanira kutenda zvakanyorwa muBhaibheri chete.
ZVAKAZARURWA 3:8 Ndinoziva mabasa ako, (tarira, ndakaisa pamberi pako mukova wakazaruka, hakuna ungagona kuupfiga), kuti unesimba shoma hako; wakachengeta shoko rangu, ukasaramba zita rangu.
Nguva yemamishinari yeFiradhefia (inoreva kuti rudo kuhama), zvisinei nehugamba hwavo hwese, vaive nesimba shoma nekuda kwezvakaipa zvese zvavaitenda mazviri. Asi vairamba vakabatirira pakutenda kuKing James vhezheni reBhaibheri uye vaikoshesa ruponeso muZita raShe Jesu Kristu pavaibuda vachienda kunyika dzevaHedeni. Vaikwanisa kukoshesa kuparidzira pasi rese ndicho chikonzero nei Mwari asina kunyanya kuvamanikidzira kuti vave nechokwadi chakazara paMagwaro.
Saka nhasi tinofanira kuva nechokwadi chekuti tinotenda chokwadi chakazara chiri muMagwaro.
Tiri munguva yeGondo tinotarisirwa kuti tione chokwadi chese.
Ngatitarisei munguva inouya.
ZVAKAZARURWA 6:11 Ipapo mumwe nomumwe wavo wakapiwa nguvo chena; vakavudzwa kuti vambozorora chinguva chiduku, kusvikira vamwe varanda pamwe chete navo nehama dzavo, dzaifanira kuvurawa saivo, varinganiswa vose.
Ava ndivo MaJuda vakaurairwa kutenda kwavo kweTestamente Yekare mukati menguva dzemakereke. Nguva yekutambudzika inenge yatanga saka sezvo Mwenga waKristu anenge akuDenga, vanenge vachida kuburuka kunoparadza sangano rekereke yeRoman Catholic rakauraya vakawandisa vavo. Asi vanoudzwa kuti vamirire kanguva kaduku. Nguva yeKutambudzika ingori makore matatu nehafu. MaJuda 144000, varanda vamwe vavo, vanenge vachifanira kugamuchira Jesu vouraiwa. Ipapo chete ndipo panozokwanisa vamwe vese kuenda kuAmagedhoni.
Pope Urban 2 akaronga kurusedhi yekutanga yakauraya ikabira maJuda munzira yavo yekuenda kuParesitina. Pope Pius 11 akabatsira Hitira pakusimuka kwake kuvanesimba. Pope Pius 12 haana kubvira amhura horokasiti umo Hitira akauraya maJuda mamiriyoni matanhatu. MaJuda iwayo ese akaurairwa kutenda kwawo anoda kwazvo kudzoka kuzotsiva kereke yeCatholic. Nevaya vemasangano anoipikisa vakaramba vanyerere.
Isu vanhu tinogara tiri mukumhanya-mhanya.
Apa tinodzidza kuti tinofanira kumira zvishoma. Mwari ane mazano makuru aari kuronga akakosha kudarika zvatinoda isu. Saka tinofanira kudzidza kufunga nezvedu zvishoma kwazvo.
Asi, rangarirai, kana tikangopinda mumumvuri werufu, “Ndini Rumuko neVupenyu; ndichamumutsa zvakare.” Uye kana Mukuru wemasimba ose aburuka akaisa hoko iyoyo pasi, ipapo, “nguva haizovapo.” Kana Mutumwa, wekunaZvakazarurwa chitsauko 10, akaisa tsoka yake imwe pamusoro penyika imwe pamusoro pegungwa, nemurarabungu pamusoro pake, Anopika, “Nguva haizovapo zve.”
Kana nguva iyi yasvika, muchamutswa kubva pakati pevakafa. Apo vamwe vese varere pakadaro apo, imi munobva mapinda.
Vakafa vakavigwa mugungwa kana panyika.
Mutumwa mukuru anouya panyika kuchiitiko chikuru kwazvo, kumutswa kwevakafa.
Bhuku yakazaruka inotsanangurwa seBhuku “duku”.
“Vashoma” vachatenda kuBhaibheri panguva yekupedzisira.
ZVAKAZARURWA 10:11 Vakati kwandiri: Unofanira kuporofita zve pamusoro pavanhu vazhinji, nendudzi, nendimi, namadzimambo.
Mabhuku mashanu aJohane anotaura pamusoro pemakore 2000 enguva yenhorondo yekereke.
Akadya Bhuku akava mumwe aive nayo pakutanga kwenguva dzemakereke.
Johane paachamutswa parumuko achange achiri kutenda kuBhaibheri rimwechete iroro. Achange amire panyika neMutumwa mukuru anenge amumutsa kubva kuvakafa.
Zvakazarurwa 10 inobata rumuko uye kugadzirira kukwira kuDenga kweMwenga. Bhuku yakanyorwa yakaziviswa ichashandiswa nevatsvene vanenge vamutswa uye Mwenga anorarama kuti vatungamirirwe mukati meKutinhira kunomwe kusina kunyorwa nezvako pakunoreva manzwi ako.
Saka Johane achadya (ozeya nekutenda) Bhuku rimwechete rakaziviswa iri pamagumo.
Saka kutanga nekupedzsira kwenguva dzemakereke kwakafanana.
Asi zvimwechetezvo naMosesi naEria vachadya bhuku iyi kuti vazive zvakavanzika zvese zvezvisimbiso zvinomwe (Kuuya kwaShe) uye Kutinhira kunomwe kunotigadzirira kuti tisvike pachiitiko ichi takakwana. Zvino Mosesi naEria vanobva vatarisana nezvakavanzika zvenguva yeKutambudzika kuti vadzivirire nekutungamirira maJuda 144000 kuti vasvike kunaJesu.
Mirirai kusvikira Kutinhira kunomwe kwareva manzwi ako kuungano inokwanisa kutora Shoko raMwari vachiriisa apo. Richacheka nekuveza. Uye vanogona kuvhara matenga; vanogona kuvhara ichi nekuita icho, chero chavanenge vachida kuita. Ngaarumbidzwe.
Achachekwa neShoko rinobva mumuromo Make; rakapinza kupfuvura munondo unocheka nekwese. Vangadaidze matani enhunzi mazana emabhiriyoni kana vachida. Amen. Zvese zvavanotaura kuti zviitike zvinoitika, nekuti iShoko raMwari rinenge richibva mumuromo maMwari. Amen.
Uku ndiko kuTinhira kunomwe kunoita kuti maprofita maviri abate basa munguva yeKutambudzika mumashure meKutinhira kumwechete uku kwapa Mwenga kutenda kwaanoda kuti agone kutorwa kukwira kunosangana naShe.
Vashoma, boka duku, ndiro richagona kuziva Kutinhira kunomwe pakunoreva manzwi ako. Saka ndivo vashoma vanovaka kutenda kwekukwira kuDenga vogona kukwira kudenga. Vashoma ava ndivo vaya vari kupedza nguva yavo zhinji nhasi vachidzosera zvakataurwa nehama Branham kuBhaibheri, nenzira iyi vanogona kunzwisisa zvinorehwa neMagwaro.
Vanhu vemharidzo vanofunga kuti Kutinhira kwakareva manzwi ako uye kuti vanoziva zvakwakataura. Asi nekuti vachiri panyika zvinoreva kuti zaruriro yavo “yakangwara” haina kuvaberekera kutenda kwekukwira kudenga.
Hatina kubvira tanzi tinofanira kungwara.
Takangonzi titevere Magwaro.
Kune dzidziso dzakawandisa pamusoro peKutinhira dzkaparidzwa mukati memakore makumi mashanu akadarika. Dzese dzine zvinhu zviviri zvakafanana.
Hakuna dzidziso dziri pamusoro peKutinhira dzinoparidzwa muzvikamu zvezvakanyorwa muMagwaro nekuti hapana chakabvira chanyorwa nezvako.
Chechipiri, hakuna dzidziso dzeKutinhira dzakabvira dzabereka zvibereko zvaive zvakatarisirwa zvekuendesa vatendi ivavo kuDenga.
Vane nyaya yekuratidzira yakanaka kwazvo uye kukwezva vazhinji asi haina zvibereko zvinoonekwa, nekuti hakuna ati atorwa kukwira kuDenga.
Zvinosuwisa, vamwe vatendi vakataura pamusoro peKutinhira uku nanhasi varere mumabwiro mavo.
Saka vashoma kwazvo vachagara neMagwaro vomirira kuti Kutinhira kunomwe kureve manzwi ako mumashure mekumutswa kwevakafa.
MATEO 7:14 Nokuti suvo rakamanikana nenzira nhete inoenda kuvupenyu, vanoiwana vashoma.
15 Chenjerai vaprofita venhema. Vanovuya kwamuri vanenguvo dzamakwai asi mukati ari mapere anoparadza.
RUKA 12:32 Musatya henyu, imi kapoka kaduku, nokuti Baba venyu vanofara nokukupai vushe.
Haasi kutaura pamusoro peboka guru munguva yekupedzisira.
RUKA 18:8 Asi kunyange zvakadaro mwanakomana womunhu kana achisvika, uchawana kutenda panyika here?
Jesu haana kuona vatendi vazhinji panguva yekupedzisira.
VAROMA 10:17 Naizvozvo kutenda kunovuya nokunzwa, nokunzwa kunovuya neshoko raMwari.
Munokwanisa chete kuvaka kutenda kwenyu paMagwaro. Kwete zvinobatwa panotaura kana pakataura vanhu.
Kana Mwari achidzoka, vashoma kwazvo vachange vachitenda zvakanyorwa muBhaibheri. Vanhu vachange vachimhanyisana nezvakabatwa paitaura vanhu nekuturikira kwavo kunovafadza pamusoro pezvakataurwa izvozvo.
I SAMUERI 15:17 Samueri akati, `Kunyange wakanga uri muduku pakufunga kwako, hauna kuitwa mukuru wamarudzi avaIsiraeri here? Jehovha wakakuzodza, kuti uve mambo waIsiraeri;
Mwari anonyanya kufadzwa nekuzvininipisa. Kuzvininipisa kunoreva kuti tinofunga zvishoma kwazvo pamusoro pedu.
Mifungo yedu nemazano edu nekuturikira kwedu zvakataurwa hazvigoni kutora nzvimbo yeMagwaro.
Hazvina maturo kukudza kuzvikoshesa kwedu kana kukosha kwevamwe vanhu.
RUKA 19:17 Akati kwaari: Zvakanaka, muranda wakanaka; zvawakanga wakatendeka pazviduku-duku, ubate maguta anegumi.
Kutevera Magwaro pane zvatinotenda mazviri ndiyo nzira yatinova vakatendeka kuShoko, rinova Mwari.
I VAKORINTE 5:6 Kuzvirumbidza kwenyu hakuna kunaka. Ko hamuzivi kuti mbiriso shoma inovirisa bundu rose here?
Kana tikakanganisa zaruriro imwechete, kukanganisa ikoko kunotipinza mune kumwe kukanganisa kworamba kuchitiendesa kure nechokwadi.
JAKOBO 3:5 Saizvozvo vo rurimi mutezo muduku, runozvirumbidza zvikuru. Tarirai, moto muduku unotungidza huni zhinji sei!
Mashoko mashoma asiri iwo anogona kubereka mufananidzo wakaipa mundangariro dzedu.
Tinonzwisisa chinhu nekuita mifananidzo yazvo mundangariro dzedu.
Kana mufananidzo uyu ukaitika zvisiri izvo, hatizofi takakwanisa Magwaro mauri zvakanaka kuti tishandise Magwaro kutsanangura kutenda kwedu. Zvino kutenda kwedu kunege kwavakirwa mujecha kwova kusatenda.
ZVAKAZARURWA 3:14 Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodhikia,
Jesu haana kunyorera kukereke iri muRaodikia, sezvaakaita kukereke muFiradefia nedzimwe.
Akanyorera kereke yeRaodikia. Ikereke yavo, kwete yaMwari.
Vane vanhu vanovatungamirira mapasita avo anotonga kereke.
Vane dzidziso dzavo dzakavakirwa pane zvakabatwa paitaura vanhu zvavanoda.
Vanonatsa nekuturikira zvakabatwa paitaura vanhu kuti vanzi vakangwara.
Makereke avo anoyevedza nengoma nemumhanzi wemadhindindi. Kufadzana kukuru uye hunyanzvi. Asi izvi zvose hazvina kunyorwa muMagwaro.
Kuva kereke yeRaodikia, Shoko harimo nekuti Jesu akamira kunze kwemukova wekereke. Asi zvakadaro havazvizivi kuti Jesu haamo (“musingazivi”) nekuti vakavarairwa zvakanyanya nekuedza kufadzana pachavo.
Munguva yedu yanhasi yatiri kurarama yechiKristu chemakwikwi, kereke imwe neimwe ichiti ndiyo yepamusoro iri nani kudairika dzimwe dzese.
MATEO 18:20 Nokuti apo pakavungana vaviri kana vatatu muzita rangu, ndiripo pakati pavo.
Akavimbisa kukomborera mapoka maduku paanoungana. Kwete mapoka makuru.
VAROMA 16:5 Ndikwazisirei vo kereke iri paimba yavo.
Mapoka maduku anosangana mudzimba ndiyo nzira yakatanga nekereke yekutanga. Hakuna munhu anoonekwa akakosha kudarika vamwe kana kereke iri duku. Kana kuti munhu apfume.
Rangarirai Jesu akarasira kunze vaiita mari muTembere.
Izvozvi pasita akapfuma anorasira Jesu, Shoko rakanyorwa, kunze kwekereke.
II VATESARONIKA 2:3 Ngakurege kuva nomunhu unokunyengerai nomutovo upi noupi; nokuti zuva iro harisviki, kana kusati kwatanga kuvuya, nomunhu wezvivi, mwanakomana wokurashika, asati ambovonekwa,
Vazhinji vacharasika magumo asati asvika. Saka musanyanye kufadzwa nekunyengerwa nemakereke makuru.
Jesu akaparidza mufananidzo pamusoro pemunhu akagadzira chirairo akakokera vanhu vazhinji.
Mwari anokoka maKristu mazhinji akaponeswa kuchirairo chemuchato neGwaiana. Asi anovagamuchira vose here?
mufananidzo unoti, Kwete.
RUKA 14:16 Iye akati kwaari: Mumwe munhu wakagadzira chirayiro chikuru, akakokera vazhinji.
17 Akatuma muranda wake nenguva yokurayira kuti avudze vakanga vakakokerwa, kuti: Vuyai, nokuti zvose zvagadzirwa zvino.
18 Ipapo vose vakatanga nomoyo mumwe kuzvirevera. Wokutanga akati kwaari: Ndatenga munda, ndinofanira kumbondouvona; ndinokumbira kuti undireverere.
Asi Mwari anotikoka chete kana tichitevera nzira yeBhaibheri tichienda kwaari.
Hatigoni kuenda kwaari nenzira dzedu.
Hapana pamaKristu akaponeswa aya anogara neMagwaro. Vose vakabatikana nezvavo zvavanoda havo. Vese vanosarudza kuita zvinhu zvavo nenzira dzavo. Saka vanoti ndapota tisiyei nekusatevera Magwaro, asi tine tsananguro dzakachenjera dzatakatora paitaura vanhu vane mbiri.
Vanotarisira kuti Mwari afadzwe nenzira dzavo “dzakangwara” dzavakasarudza ivo kuti vabatire Mwari nadzo.
Pamusoro pazvose ikereke yavo, kereke yeRaodikia. Saka vanogona kuita zvavanoda. Haisi kereke yaMwari.
RUKA 14:24 Nokuti ndinoti kwamuri: Hakuno mumwe kunavarume avo vandakakokera, ucharavira chirayiro changu.
Mhinduro iri pachena.
Mwari haasi kufadzwa nekereke yanhasi nemapasita avo akakosha. Haavadi kuti vave Mwenga wake.
MATEO 7:22 Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe, Ishe hatina kuprofita muzita renyu here? Nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu here? Nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here?
23 Zvino ndichavavudza pachena handina kutongokuzivai, ibvai kwandiri imi vaiti vokusarurama.
Kuita zvinhu zvikuru kwazvo hakuna zvakunoreva kana tisingateveri Magwaro zvakazara.
Saka vamwe vanotsvagwa kuti vadye chirairo.
RUKA 14:23 Ishe akati kumuranda: Buda kunzira nokuvuzhowa, uvagombedzere vapinde, imba yangu izare.
Vanhu vakaipa vane chinyabvurira, vakarambwa munharaunda dzinogara vanhu, vanogara kuvuzhowa nekunzira.
MaKristu akanaka, akaponeswa vanosarudza zvitendero zvemasangano pachinzvimbo cheBhaibheri reKing James Vhezheni. Saka Mwari anovaramba odaidza vanhu vakaipa.
Nhasi, maKristu anozviita vatsvene pasi rese vanoramba mutungamiri wenyika yeAmerica Trump nekuti ane nhorondo yakaipa yehupenyu hwake. MaKristu haagoni kushandura mafungiro avo chero akakunda musarudzo zvisinei nekuoma kwazvaive zvakaita. Aisatofanira kukunda.
Asi nei akakunda?
Nekuti ndiye mutungamiri wenyika wekutanga kupikisana nemafungiro evamwe vese vepasi rese vakaita sarudzo vakakunda rutivi rwake nezvibodzwa 128 ku 9 mumusangano weUN mubatanidzwa wenyika dzepasi rese apo vaida kumisa kuti Jerusarema riitwe guta guru reIsraeri. Nyika dzese dzemaKristu dzakasarudza dzichipikisa kuti Jerusarema riitwe guta guru reIsraeri. Bill Clinton, George Bush, naObama vaive vanhu vakanaka kwazvo asi havana kubvira vaita zvivindi zvekumisidzana nenyika dzemaMosiremu dzese. Vaitya Allah kudarika kutya kwavaiita Jesu.
Nyika 128 dzakasarudza dzichipikisana naMwari. Nyika pfumbamwe dzakasarudza rutivi rwaMwari. Izvi zvinoratidza kuti vashoma zvakadii vachabatira Mwari pakupedzisira.
Saka uyu mufananidzo wenguva yekupedzisira.
Kana vanhu vakanaka vasingazoiti nzira yaMwari yeMagwaro, ipapo vanhu vakaipa vanobva vakokwa kuzobatira Mwari.
Tinodzidza kuti vanhu vakaipa vane kushinga kukuru kudarika vanhu vakanaka. Mutungamiri wenyika Trump akabatsira kuzadzisa makore 2000 echiprofita pamusoro pekudzoka kwemaJuda kuJerusarema. Kuita kwakanaka kwazvo. SaCyrusi muPesia akatumira maJuda kuti adzokere kuJerusarema achibva kuBabironi.
Kuzvimiririra. Kuva vashoma pakupedzisira. Zvinoda hushingi hukuru kwazvo.
1965 NGUVA YEKEREKE YEEFESO – BHUKU RENGUVA DZEMAKEREKE CHIITSAUKO 3
Sezvo makunzwisisa kuti tinotonga sei kuti kereke yechokwadi yaive yakadii (zvayaive paPentekosita nezvayaive munguva yevapostora sezvayakagadzwa muShoko muBhuku raMabasa) tinokwanisa kuisa mutemo mumwechete iwoyo kuti tione kuti kereke yakawira pasi sei. Chitadzo chikuru kana zvitadzo, zvakapindira mukereke yekutanga zvikaziviswa muBhuku raMabasa naZvakazarurwa nemumabhuku mana eEvangeri zvichabuda pachena zvikuru munguva imwe neimwe, kusvikira tasvika pakubviswa kwakazara kwechokwadi munguva yekupedzisira, yeRaodikia.
Zvino kubva mukiyi yekutanga iyi yatagamuchira kubva kunaShe, kunouya chimwe chokwadi chakanakisa. Ndati chokwadi chinoramba chichiedza kunoita sezvachaive muBhuku raMabasa. Ndizvo chaizvo. Asi takaona kuti Shoko rinodzidzisawo kutanga kwechakaipa kusvikira kwaita kubviswa kwakazara kwechokwadi mumazuva ekupedzisira Mwari ava pedyo kuuya.
MATEO 22:14 Nokuti vazhinji vakadanwa, asi vakasanangurwa vashoma.
ZVIREVO 30:24 Zvinhu zvina zviriko panyika zviduku hazvo, Asi zvakachenjera kwazvo, zvinoti:
25 Majuru, rudzi rusine simba harwo; Kunyange zvakadaro anounganidza zvokudya zvawo muzhizha;
Majuru anogara achishanda. Muzhizha anounganidza chikafu chenguva yechando. Tinofanira kunge tichidzosera zvatakabata paitaura vanhu kuMagwaro totenda dzidziso nekuti Magwaro anotaura kudaro, kwete kuti nekuti Hama Branham vakataura kudaro. Iyi ndiyo nguva yemvura yekutanga, mvura yedzidziso. Izvozvi tine nguva yekudzidza.
Mvura inotevera ndiyo mvura yekukohwa apo mbeu inobviswa kubva padavi rayakaberekwa ikakura iri. Vakafa vanobviswa kumabwiro Mwenga anobviswa panyika okwira kuDenga. Ndizvo zvinouya kuzoitwa neMutumwa mukuru. Totenda dzidziso dzehama Branham, Bhaibheri rakanyorwa rinofanira kuva Bhuku yakazarurwa kwatiri. Kana risiri, hamuzovi chikamu chekuenda kwekupedzisira.
Munozofanira kuwana Kutinhira kunomwe kusina kunyorwa kwakavanzwa muMagwaro pane imwe nzvimbo pakunoreva manzwi ako. Saka ivai nechokwadi chekuti munoziva kwazvo Shoko rakanyorwa.
Webhisaiti ino yakaitwa kuti ibatsire munhu wese kuti aite tsvagurudzo iyoyo.
Asi boka duku ndiro richakunda.
Izvozvi tinofanira kunge tichidzidza kuti toturikira sei Bhaibheri kubva kune zvakataurwa nehama Branham.
ZVIREVO 30:26 Mbira, rudzi rusine simba harwo, Kunyange zvakadaro dzinoita imba yadzo mumatombo;
Idzi imbira dzemumatombo. Nesuwo hatinesimba kunge idzo asi tinofanira kudzidza kuvanda muBwe iye Kristu, Shoko rakaziviswa.